Ngaba uyawazi umahluko phakathi kwesepha yokuhlamba kunye nesepha yolwelo?
ngomphathi ku 20-09-16
Into esebenzayo yokuhlamba impahla ikakhulu ayiyoniki, kwaye ulwakhiwo lwayo lubandakanya ukuphela kwamanzi-amanzi kunye nesiphelo esimanzi seoyile, apho isiphelo esimanzi seoyile sidibanisa nebala, emva koko sahlule ibala kunye nelaphu ngokuhamba komzimba. ixesha, ii-surfactants zinciphisa uxinzelelo lwamanzi, ke ...
ibha yesepha emotweni yakho inokwenza okuhle kakhulu
ngomphathi ku 20-08-28
Isepha kubomi bethu bemihla ngemihla yimfuneko eqhelekileyo yemihla ngemihla, inokuthengwa nakweyiphi na ivenkile enkulu, ukuba uyifaka emotweni, kukho izibonelelo ezininzi. Okokuqala, ngeentsuku zemvula, thatha isepha elungiselelwe ukusombulula ingxaki Inkungu kwisipili esibonisa ngasemva, indlela ethe ngqo yokusebenzisa isepha ngasemva
Kutheni le nto ukuhlamba ngesepha namanzi kusikhusela kusulelo I-COVID-19?
ngomphathi ku 20-07-28
Ngokwe-World Health Organisation (i-WHO) kunye nezinye iiarhente ezininzi kunye neengcali zezempilo, eyona ndlela yokuphepha i-COVID-19 kukuqinisekisa nje ukuhlanjwa kwezandla ngesepha namanzi ngalo lonke ixesha. sebenza amaxesha angenakubalwa, isebenza njani kwi ...
Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. yasekwa ngo-1997, ibekwe e Shijiazhuang-Hebei kwiphondo-inkulu kwezoqoqosho.
Ilali yaseGengzhuang, iPaki yezoShishino, iShenze County, iShijiazhuang, Hebei
I-Hebei Baiyun yemihla ngemihla imichiza Co., LTD. kakhulu ...
Imichiza yeBaiyun yemihla ngemihla ithathe inxaxheba kwi ...